आज ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस हुँदै - नेपालबहस
आज ट्रम्प र बाइडेनबीच पहिलो बहस हुँदै
| ८:०७:४२ मा प्रकाशित
१३ असोज, काठमाडौं । अमेरिकाको राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र पूर्व उपराष्ट्रपति जो बाइडेनबीच पहिलो बहस आज हुँदैछ। बहस मंगलबार राति ९ बजे ‘नेपाली समयअनुसार बुधबार बिहान ७ः४५ बजे’ हुनेछ।
चुनाव प्रचारको अन्तिम दौडम रहेका उनीहरुबीच तीन चरणको बहस हुनेछ। दोस्रो बहस १५ र तेस्रो २२ अक्टोबरमा हुनेछ। अमेरिकी राष्ट्रपति पदको निर्वाचन ३ नोभेम्बरमा हुनेछ। ट्रम्प रिपब्लिकन र बाइडेन डेमोक्र्याट उम्मेद्वार हुन्।
कोरोना भाइरस महामारीका कारण यो वर्षको बहस केही फरक हुनेछ। यसपटक बहसका सहजकर्ता एक जना मात्र हुने छन्। ‘प्यानालिस्ट’ हुने छैनन्।
सीएनएनका अनुसार बहसकर्ता र सहजकर्ताले मास्क लगाउने छैनन्। तर, हात मिलाउने ऐतिहासिक परम्परा यसपटक हुने छैन। ट्रम्पकी पत्नी मेलानिया र छोरी इवान्का दर्शकको सिटमा बस्न पाउने छन्। बहस केस वेस्टर्न रिजर्व विश्वविद्यालय ओहायोमा हुनेछ। बहस ९० मिनेटको हुनेछ। बीचमा विश्राम हुने छैन।
बहसको सहजकर्ता फक्स न्यूजका प्रस्तोता क्रिस वालेस हुने छन्। उनले सन् २०१६ को निर्वाचनअघि ट्रम्प र डेमोक्र्याट उम्मेद्वार हिलारी क्लिन्टनबीच पनि बहस गराएका थिए।
पहिलो बहस ६ वटा मुद्दामा केन्द्रित हुने जनाइएको छ। यसपटक दुवै उम्मेद्वारको विगत, सर्वोच्च अदालत, कोरोना भाइरस, अर्थतन्त्र, नस्लवादी हिंसा र चुनावी निष्ठामाथि बहस हुनेछ।
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशमा एमी कोनी ब्यारेट नियुक्त १५ घण्टा पहिले
ट्रम्प र बाइडेनको अन्तिम बहस : ट्रम्पको दावीप्रति बाइडेनको व्यङ्ग्य ५ दिन पहिले
ट्रम्पलाई अब बिदा गर्नु पर्नेमा ओबामाको जोड ५ दिन पहिले
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प निर्वाचन सर्वेक्षण, सञ्चार माध्यम र डा. फाउचीप्रति आक्रामक १ हप्ता पहिले
ट्रम्प चुनावी सार्वजनिक कार्यक्रममा पुनः सक्रिय, स्वस्थ भइसकेको दावी २ हप्ता पहिले
ह्वाइट हाउसको बार्दलीबाट राष्ट्रपति ट्रम्पको सम्बोधन, म पूर्ण स्वस्थ छु ! २ हप्ता पहिले
भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन लालपुर्जा दिइने २० घण्टा पहिले
काठमाडौंको असनमा सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकको नयाँ शाखा संचालन ५ दिन पहिले
आज उपत्यकामा १५५२ जना संक्रमित थपिए ५ दिन पहिले
बलिउडका सुपरस्टार नरेश कनोडियाको निधन १५ घण्टा पहिले
देउराली सामुदायिक वन रेडपाण्डा अनुसन्धान केन्द्र बन्दै ६ दिन पहिले
सनराइज बैंकको ५१ औं शाखारहित बैंकिङ सेवा रुपन्देहीमा सुरु ६ दिन पहिले
मंसिरदेखि सवारी चालक अनुमतिपत्र वितरण गर्ने २ हप्ता पहिले
आइसोलेसन निर्माणको काम सुस्त ३ हप्ता पहिले
भजनीका ५३५ घर नदी कटानको उच्च जोखिममा २ हप्ता पहिले
संक्रमण नियन्त्रणमा प्रहरीको भूमिका प्रशंसनीय २ हप्ता पहिले
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्धारा आगामी महिना कोभिडको समस्या थप बढ्ने चेतावनी ४ दिन पहिले
सिनो हाइड्रोका मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएपछि विद्युतगृह निर्माणको काम प्रभावित ३ हप्ता पहिले
रुपन्देहीमा एक हप्ता निषेधाज्ञा थप १ महिना पहिले
खतिवडा प्रधानमन्त्रीको विशेष आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्त १ महिना पहिले
भीमफेदी–कुलेखानी हुँदै काठमाडौँतर्फ जाने सवारीसाधन सञ्चालनमा ४ महिना पहिले